मुटुरोगको उपचार विदेशमा भन्दा कैयौँ गुना कम खर्चमा नेपालमै उपलब्ध छ – Health Post Nepal
मुटुरोगको उपचार विदेशमा भन्दा कैयौँ गुना कम खर्चमा नेपालमै उपलब्ध छ
२०७५ असोज १२ गते १०:२३
नेपालको कुल जनसंख्याको १० प्रतिशतमा मुटुको समस्या पाइन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वभर करिब १ प्रतिशत मानिसमा जन्मजात मुटुरोग लाग्ने गरेको हो । नेपालमा गरिएको विभिन्न अनुसन्धानबाट पनि यो तथ्य पुष्टि भएको छ । मुटुरोगीको संख्या जिल्ला विशेषमा फरक छन् ।
विदेशमा मुटुरोगको अवस्था कस्तो छ ?
मुटुरोग कुन उमेर समूहका मानिसमा बढी लाग्ने गर्छ ?
नेपालमा कति मुटुरोगीको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ ?
३५ वर्षभन्दा बढी उमेरका महिलाले बच्चा जन्माएमा पनि त्यस्ता आमाबाट जन्मिएका बच्चामा कतिपय अवस्थामा मुटुरोग लाग्ने गरेको छ । गर्भावस्थामा धूमपान, मद्यपान तथा सुर्तीजन्यपदार्थको सेवन गरेमा पनि मुटुसम्बन्धी विभिन्न रोगहरू लाग्न सक्छन् ।
बच्चा जन्मँदै मुटुरोग के कारणले लाग्छ ?
मानिसको जीवनशैलीका कारण मुटुरोग लाग्ने सम्भावना कति हुन्छ ?
पछिल्लो समय मुटुरोग बढ्नुका कारणहरू के–के होलान् ?
पछिल्लो १० वर्षमा मुटुरोगीको संख्या दोब्बर नै भएको छ । सहरी क्षेत्रका मानिसको जीवनशैलीमा आएको व्यापक परिवर्तनका कारण वर्तमान समयमा ग्रामीणभन्दा सहरी क्षेत्रमा मुटुरोगीको संख्या बढी देखिएको छ । कतिपयमा जन्मजात नै मुटुरोग हुने भएकाले पनि पछिल्लो समय मुटुरोगीको संख्या बढेको हो । हाम्रो अस्पतालमा भने दैनिक रूपमा ओपिडीमा २ सयको संख्यामा मुटुरोगी उपचारका लागि आउने गरेका छन् भने वार्षिक रूपमा यो अस्पतालले करिब ७ सय मुटुरोगीको शल्यक्रिया गर्ने गरेको छ । हाम्रोमा दैनिक शल्यक्रिया हुँदैन । एक दिन ओपिडी जाँच हुन्छ भने एक दिन शल्यक्रिया हुन्छ ।
नेपालमा कस्ता प्रकृतिका मुटुरोगी बढी भेटिने गरेका छन् र तिनको उपचारको अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा कुल जनसंख्याको करिब १० देखि १५ प्रतिशत मुटुरोगी छन् । तीमध्ये सबैभन्दा बढी बाथ ज्वरोका कारण हुने मुटुरोगका बिरामी छन् । त्यसपछि जन्मजात मुटुरोगीको संख्या दोस्रो स्थानमा छ । हृदयाघात गराउने मुटुरोगीको संख्या तेस्रो स्थानमा छ भने मांसपेशीसम्बन्धी मुटुरोगी पनि नेपालमा उल्लेख्य छन् । विश्वमा जेजस्ता मुटुरोग पहिचान भएका छन्, ती सबै नेपालमा पनि देखापरेका छन् । सम्पूर्ण मुटुरोगको उपचार काठमाडौंमा मात्रै उपलब्ध हुने गरेको वर्तमान अवस्थामा ती सुविधाहरू उपत्यकाबाहिर पनि पु¥याउनु आवश्यक छ । काठमाडौंबाहेक धरानमा पनि मुटुरोगको उपचार भने हुने गरेको छ ।
मुटुको सबैभन्दा बढी शल्यक्रिया गंगालाल अस्पतालमा हुने गरेको छ । त्यसपछि शल्यक्रिया गर्नेमा हाम्रो संस्था दोस्रोमा पर्छ । हरेक प्रदेशमा एक मुटुरोग उपचार केन्द्र खोल्नु आवश्यक देखिन्छ । नेपालमा सबैखालका मुटुरोगको उपचार उपलब्ध छ ।
मुटुरोगमा नेपालका अस्पतालले प्रदान गर्ने उपचार सेवा कत्तिको गुणस्तरीय पाउनुहुन्छ ?
विश्व मुटु दिवस विशेष